创世记 34 CCB - 1 Mose 34 AKCB
1一天，利亚给雅各所生的女儿底娜到外面去见当地的女子。 2当地首领希未人哈抹的儿子示剑看到她，就抓住她，强行玷污了她。 3他恋慕雅各的女儿底娜，就用甜言蜜语讨她欢心。 4他求父亲哈抹为他说亲，把底娜娶过来。 5消息传到雅各耳中时，他的儿子们正在田野放牧。他只好忍气吞声，等儿子们回来再作打算。 6示剑的父亲哈抹来和雅各商议。 7雅各的儿子们一听说这事，就从田野赶回来。大家都非常愤怒，因为示剑不该对以色列家做这丑事——玷污雅各的女儿。
8哈抹跟他们商议说：“我儿子示剑爱慕你们家的女儿，请你们把女儿嫁给他吧！ 9我们可以互相通婚，你们可以把女儿嫁给我们的儿子，也可以娶我们的女儿为妻。 10你们可以在我们这里安顿下来，这片土地就在你们面前，住在这里做买卖、置产业吧。” 11示剑对底娜的父亲和她的弟兄们说：“请你们恩待我，你们要什么，我都给你们。 12只要你们答应把女儿嫁给我，无论你们要多少聘金和礼物，我必如数奉上。”
13雅各的儿子们因为示剑玷污了他们的妹妹底娜，就假意对示剑和他的父亲哈抹说： 14“我们不能把妹妹嫁给没有受过割礼的人，这对我们是一种羞辱。 15除非你们所有的男子都跟我们一样受割礼， 16我们才能答应和你们通婚，共同生活，结成一个民族。 17如果你们不肯这样做，我们就把妹妹带走。”
18哈抹父子欣然答应。 19示剑毫不迟延地照办，因为他热恋底娜。在哈抹家族中，他最受人尊重。 20哈抹父子来到城门口，对那城的居民说： 21“这些人跟我们相处和睦，就让他们在这里定居、做买卖吧。我们这里有足够的地方可以容纳他们，我们可以和他们通婚。 22可是，他们有一个条件，就是要我们所有的男子和他们一样接受割礼，他们才答应和我们一起生活，结成一个民族。 23到时候，他们的财产和牛羊等所有牲畜不全归我们了吗？我们同意他们吧，这样他们就会在我们这里定居。” 24在城门进出的人听了哈抹父子的话，都表示赞同。于是，城里的男子都接受了割礼。
25到了第三天，他们伤口正疼痛的时候，雅各的两个儿子——底娜的哥哥西缅和利未拿着利剑，乘众人没有防备，潜入城中，杀掉了所有的男子， 26包括哈抹和示剑，从示剑家里带走了底娜。 27雅各的儿子又到城里掳掠，因为他们的妹妹在那里被人玷污。 28他们抢走牛群、羊群、驴群和城里城外所有的东西， 29并带走所有财物、妇孺以及房屋里的一切。 30雅各责备西缅和利未说：“你们为什么要给我惹麻烦，使我在当地的迦南人和比利洗人中留下臭名呢？我们人数很少，要是他们联手来攻击我们，我们全家必遭灭门之祸。” 31他们说：“他怎么能把我们的妹妹当妓女对待？”
CCB : 创世记 34
1 Mose 34:1-31
Sekem Gu Dina Ho Fi
1Da koro bi, Lea ne Yakob ba Dina fii adi kɔsraa mmabaa a wɔwɔ wɔn mpɔtam hɔ no. 2Bere a Hewifohene Hamor babarima Sekem huu Dina no, ɔkyeree no kɔtoo no mmonnaa. 3Efi saa bere no, Sekem tuu nʼani sii Yakob ba Dina so. Ɔbɔɔ mmɔden ara sɛ ɔne no bɛkasa ama wapene so, na waware no. 4Ɛno nti, Sekem dii ho nkɔmmɔ kyerɛɛ nʼagya Hamor se, “Mepɛ sɛ meware ababaa yi, enti kɔka ne ho asɛm ma me!”
5Bere a Yakob tee sɛ Sekem akɔkyere ne babea Dina akɔto no mmonnaa no, na ne mmabarima no nyinaa ne wɔn agya anantwi wɔ wuram. Enti Yakob anka hwee kosii sɛ wɔbae.
6Sekem nʼagya Hamor kɔɔ Yakob nkyɛn ne no kodii nkɔmmɔ. 7Yakob mmabarima no tee wɔn nuabea Dina ho asɛm no pɛ, wofii wuram hɔ bae. Wɔn werɛ howee na wɔn bo nso fuw yiye, efisɛ Sekem ayɛ aniwude wɔ Israel. Ɔne Yakob babea dae, na eyi yɛ akyiwade.
8Nanso Hamor ka kyerɛɛ Yakob se, “Me ba Sekem ani gye wo ba Dina ho. Mesrɛ wo, fa no ma no na ɔnware no. 9Mo ne yenni aware. Momfa mo mmabea mma yɛn, na yɛnware wɔn, na yɛn nso, yɛmfa yɛn mmabea mma mo aware. 10Mubetumi ne yɛn atena. Asase yi nyinaa yɛ mo dea. Montena so, nni gua wɔ so, mpɛ mu agyapade.”
11Na Sekem ka kyerɛɛ Dina nʼagya ne ne nuabarimanom no se “Munnye me nto mu. Biribiara a mubegye me no, metua. 12Ɔbea no ti ade ne biribiara a mubegye aka ho no, mommɔ bo biara a mopɛ, na metua. Nea ehia me ara ne sɛ, mode ababaa no bɛma me aware.”
13Esiane sɛ na Sekem agu wɔn nuabea Dina ho fi no nti, mmuae a wɔmaa Sekem ne nʼagya Hamor no anyɛ nokware. Na mmom, na wɔwɔ adwene foforo bi wɔ akyi. 14Yakob mmabarima no ka kyerɛɛ Sekem ne nʼagya Hamor se, “Yɛrentumi mfa yɛn nuabea mma ɔbarima a ontwaa twetia aware. Sɛ yɛyɛ saa a, na yɛagu yɛn ho anim ase. 15Ansa na yɛde yɛn nuabea bɛma wo aware no, gye sɛ woatwitwa wo mmarima nyinaa twetia te sɛ yɛn. 16Sɛ moyɛ saa de a, yɛne mo bedi aware. Mobɛware yɛn mmea, na yɛn nso, yɛaware mo mmea. Yɛne mo bɛtena fɛfɛɛfɛ sɛ nnipa baako. 17Sɛ moampene so amma wɔantwitwa mo twetia de a, yebegye yɛn nuabea de no akɔ.”
18Asɛm a wɔkae no tɔɔ Hamor ne ne ba Sekem asom. 19Sekem a na ɔyɛ aberante a odi mu wɔ nʼagya mma nyinaa mu no antwentwɛn ne nan ase koraa. Okotwaa twetia no, sɛnea Yakob mma no kae no, efisɛ na ɔpɛ Yakob babea no yiye. 20Enti Hamor ne ne ba Sekem kɔbɔɔ gua wɔ kurow no pon ano ne ɛhɔ mmarima kɔkasae se, 21“Yakob ne ne mma yi ne yɛn te yiye. Mompene so na wɔne yɛn ntena yɛn asase yi so, na yenni gua. Efisɛ yɛn asase yi so a yɛne wɔn bɛsen so. Yebetumi aware wɔn mmabea, na wɔn nso betumi aware yɛn de. 22Nanso ansa na wɔn mmarima no bɛpene so ne yɛn atena sɛ nnipa koro no, gye sɛ yɛn mmarima nyinaa twitwa twetia, sɛnea wɔn nso wɔatwitwa twetia no. 23Sɛ ɛba saa a, wɔn mmoa, wɔn agyapade ne wɔn mmoa ahorow a ɛkeka ho no nyinaa remmɛyɛ yɛn de ana? Enti momma yɛmpene so mma wɔn, na yɛne wɔn ntena.”
24Mmarima a wokohyiaa Hamor ne ne ba Sekem wɔ kurow no pon ano no nyinaa ne wɔn yɛɛ adwene maa mmarima a wɔwɔ kurom hɔ nyinaa twitwaa twetia.
Dina So Aweretɔ
25Nnansa akyi a na twetiatwa no nti, kurom hɔ mmarima no nyinaa deda hɔ a wogye wɔn ho a ennye no, Yakob mmabarima baanu Simeon ne Lewi a wɔyɛ Dina nuabarimanom no faa wɔn mpeaw. Wɔkɔtow hyɛɛ kurow no so bere a wɔn ani nna wɔn ho so, kunkum mmarima a wɔwɔ kurom hɔ nyinaa. 26Wɔde peaw kum Hamor ne ne ba Sekem, na wɔfaa wɔn nuabea Dina fii Sekem fi de no kɔɔ wɔn nkyɛn. 27Yakob mmabarima a wɔaka no nso tow hyɛɛ kurow no so. Wotiatiaa nnipa a wɔawuwu no so, fom kurow no mu nneɛma nyinaa pasaa, efisɛ ɛhɔ na Sekem guu wɔn nuabea Dina ho fi. 28Wɔfom wɔn mmoa, wɔn anantwi, wɔn nguan, wɔn mfurum ne wɔn agyapade biara a ɛwɔ kurow no mu ne nea ɛwɔ wuram nyinaa. 29Wɔfaa wɔn ahode, wɔn yerenom ne wɔn mmea, fom wɔn afi mu nneɛma nyinaa.
30Na Yakob ka kyerɛɛ Simeon ne Lewi se, “Mode ɔhaw abɛto me so, ama nnɛ me ho koraa abɔn Perisifo ne Kanaanfo a mete wɔn asase so yi. Yɛnnɔɔso. Sɛ wɔka wɔn ho bo mu bɛtow hyɛ yɛn so a, wɔbɛhyew me ne mʼasefo nyinaa.”
31Na wobuaa wɔn agya se, “Enti anka yɛntena hɔ nhwɛ na ɔnyɛ yɛn nuabea sɛ oguamanfo ana?”
AKCB : 1 Mose 34